बाहीरीे संसारलाई मात्र हेर्ने हो भने त आहा! छ । तर वास्तविक भोगाइको अर्थ जब बुझिन्छ तब श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ । – dudhkoshionline
काठमाडौँ । सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचासल्यान गाउँपालिका अर्थात साविकको सल्यान गाविसमा बुबा मनिराम थुलुङ राई र आमा कमला थुलुङ राइको कोखबाट कान्छि छोरीको रुपमा जन्मनुभएकी ममता राई सानै उमेरदेखि नृत्यमा रुचि भएको कारण आज कला क्षेत्रमा स्थापित हुनुभएको छ । डान्स टिचर, कोरीयोग्राफर हुँदै आज उहाँ निर्देशक बनिसक्नुभएको छ । आफनो मेहनत र निरन्तरताको कारण यो स्थानसम्म आईपुग्दा निकै नै संघर्ष गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।
आज म जहाँ छु, मेरो कलाप्रतिको मोह र धैर्यताको कारण छु । ग्रामिण भेगमा जन्म भयो । स्रोत साधनको कमी । अझ आफुले रुचि गरेको क्षेत्रमा आफुलाई समर्थन गर्ने र पथप्रदर्शक नहुँदाको पीडा । यी सबै दुखलाई आत्मसाथ गर्दै आफनो प्यासनलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तरता दिएकै कारण आज यो स्थानसम्म आइपुग्दा आफुलाई निकै नै भाग्यमानिको रुपमा लिएकी छु ।
हरेक अभिभावकलाई आफनो सन्तानले राम्रो काम गरेको हेर्ने इच्छा कसको हुँदैन र । जसकारण मेरो बुबाआमाको पनि सोचाइ छोरी सरकारी जागिरे होस भन्ने थियो ।
बच्चा हुँदा टेलिभिजनमा अरु नाचेको देख्दा आफुलाई पनि नाच्ने इच्छा जाग्थ्यो । सानोमा चलचित्र खुब हेरीन्थ्यो, हिरोइन नाचेको देख्दा घरमा लुकी लुकी नाच्ने गर्थेँ । निरुता सिंहको नाच खुब मन पथ्र्यो ।
नर्स बन्ने ठूलो सपना थियो । तर टिभिमा अरु नाचेको देखेर आफुमा पलाएको त्यो रहरलाई करीयर बनाउँछु भन्ने आफुमा आत्मविश्वास चुलिँदै गयो । तर परिवारले समर्थन गर्लान र ? परिवारले समर्थन गरेपनि समाजले के भन्छ ? यस्ता कैयौँ प्रश्नहरु मनमा उब्जीरहन्थे । मनले विभिन्न तर्क विर्तकहरु गरिरहन्थे ।
पीतृसतात्मक देश नेपाल । अझ गाउँको परिवेशमा जन्म भएको कारण ग्ल्यामरको क्षेत्रलाई समाजले बुझने शैलि, हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा धेरै फरक छ । जसकारण पनि अभिभावकले खुलेर समर्थन गर्न केही संकोच भने अवश्य थियो । सन्तानको सुख, खुशी अनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्ने अभिभावकलाई चिन्ता बढ्नु स्वभाविक पनि होकि यो क्षेत्रमा लागेर छोरीले कसरी जीविकोपार्जन गर्न सक्छ ? यस्तो क्षेत्रमा कहाँ भविष्य हुन्छ ?
हुन त बुबा आमा दुवै जना शिक्षण पेशामा आबद्ध भएको कारण शिक्षित परीवारमा जन्म भयो । आफुले गर्न चाहेको काममा खासै बाधा अड्चन थिएन । तरपनि छोरीले हामीले भनेको काम गरिदिओस भन्ने चाहाना भने अवश्य थियो ।
कक्षा आठसम्म गाउँकै स्कूलमा अध्ययन गरेपनि कक्षा नौँ देखि काठमाडौँ आएर अध्ययनलाई निरन्तरता दियँ । ०६७ मा एस एलसी पास गरेपछि अर्को साल ०६८ सालदेखि कलेज जान थाले । कलेज जाँदै गर्दा आफनो रुचिको क्षेत्र नृत्यलाई भने चटक्कै माया मार्न सकिन ।
‘खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन’ भन्ने उखान जस्तै एसएलसी पश्चात नृत्य सिक्न समेत शुरु गरे । काठमाडौँको बसुन्धरा स्थित ‘डान्स एडिसन डान्स सेन्टरमा’ डान्स टिचर रामकुमार राईसँग डान्स क्लास लिन शुरु गरे । डान्स सिक्नका लागि पनि घरबाट न खर्च हुन्थ्यो । तर केही समयपछि पढाइको लागि जति निर्धक्क भएर घरमा पैसा माग्थेँ, नृत्य सिक्नका लागि पैसा माग्न उत्तिकै अप्ठ्यारो महसुस हुन थाल्यो ।
‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ भनेजस्तै आफनो पकेट खर्चको रुपमा आएको पैसा, दशैँ अनि तिहारमा जम्मा भएको सबै पैसा जम्मा गर्दै नृत्य सिक्नका लागि खर्च गर्न शुरु गरे । अन्य साथिहरु कहाँ कहाँ घुम्न जान्थे, रेष्टुरेण्टमा थरिथरिको खानाको स्वाद र परिकारमा रमाउने गर्थे, डिजाइन डिजाइनका कपडाहरुमा खर्च गर्ने गर्थे तर मैले त्यस्तो नगरि आफनो रुचिको क्षेत्रमा खर्च गरे ।
साना साना कुरामा खुशी हुन सिके । आफनो मेहनत र कमाइमा रमाउन सिके । कल्पनामा भन्दा वास्तविकतामा बाँच्न सिके ।
शुरुमा नेपालि लोक नृत्य सिक्दै भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक नाचमा छ वर्षे सिनियर डिब्लोमा पनि अध्ययन गर्ने अवसर पाए । साथै पद्यम कन्या क्याम्पसबाट नृत्य विषयमा स्नातक तह पूरा गरीसकेकी छु ।
खोटाङ जिल्लाको चिउरीबासमा सडक विस्तारको लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नाच्दा पहिलो पटक दुइ हजार पाएकी थिए । थोरै भएपनि आफनो मेहनतको पैसा पाउँदा आनन्द लागेको थियो । पैसा भन्दा पनि आफनो प्रतिभा देखाउन पाउँदा अर्को छुट्टै आनन्द मिलेको थियो ।
नृत्य सिक्ने क्रममा खुट्टाको छाला उप्कीएको थियो । त्यो समयमा पनि नृत्य सिक्न छोडिन । शारीरिक पीडा हुन्छ र पनि कलाप्रतिको मोह त्याग्न सकिन । कामको दौडानमा कहिलेकाँही कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, भोकतिर्खा भन्न पाइन्न ।
संघर्षको क्रममा यस क्षेत्रलाई अब बिर्सीएर अन्य कुनै पेशा नै अंगालौ की भन्ने पनि लाग्थ्यो । तर फेरि एउटा मनले यहि क्षेत्र राम्रो छ । यहि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर आफैलाई सम्झाउने गर्थेँ । बाहीरको संसारलाई मात्र हेर्ने हो भने त आहा! नै छ । तर वास्तविक भोगाइको अर्थ जब बुझिन्छ तब श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ । वास्तविक पीडालाई लुकाएर बाहीरको देखावटि हाँसोलाई नै आज साथि मानेकी छु ।
१६ वर्षको उमेरदेखि नृत्य सिक्दै र सिकाउँदै आज निर्देशक भएर काम गर्ने अवसर मिलेको छ । आठ वर्षको अवधिमा यति धेरै संघर्षको साथ यो स्थानमा आईपुग्दा साँच्चै केही सफलता मिलेको भान हुन्छ । हुन त कति काम पुरा हुँदा सफल हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिदैन तर पनि म आफुले मेहनत र संघर्ष गरेको सम्झदा यहि नै होला सफलता भन्ने महसुुस हुन्छ ।
आफनो रुचिको क्षेत्रमा केहि नाम अनि आफुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने किसीमको दाम कमाउन सक्ने भएकी छु, अर्थात आफनो खुट्टामा उभिन सकेको कारण केही हदसम्म सफलता मिलेको महसुस गर्न पाएकी छु ।
विभिन्न गितहरुमा कोरीयोग्राफी गर्दै, सयौँ विद्यार्थीहरुलाई नाच्न सिकाउँदै आज निर्देशकको ट्याग पाउँदा खुशी लागेको छ । थुलुङ समुदायको ‘हाम बोमु झाम’ गितबाट निर्देशन शुरु गरेर अहिलेसम्म पाँच वटा गितमा निर्देशकको रुपमा काम गरिसकेकी छु । आफुले गरेको काम दर्शकहरुलाई राम्रो लागेको प्रतिक्रिया र तारीफ पाउँदा अझ आत्मबल थपिन्छ ।
त्यसपछि कामलाई अझ लामो समयसम्म निरन्तरता दिउँ भन्ने लाग्छ । यो क्षेत्रमा दर्शकहरुले दिएको मायाँ र साथ नै मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो सम्झन्छु । साथै निर्देशन क्षेत्रमा कदम चलाउनुहुने विषेशतः महिला दिदिबहिनीको लागि थोरै मात्रामा भएपनि प्रेरणाको स्रोत बन्ने प्रयास गरेकी छु । थाहा छैन भोलिको समय कस्तो हुन्छ, तर आजको लागि बाँच्ने शाहस गरेकी छु ।
निर्देशनको पाटो अलि चुनौतीपूर्ण छ । आफुले सम्प्रेषण गर्न खोजेको कथालाई दर्शकले कसरी लिनुहुन्छ, दर्शकले त्यो कथाको भावलाई बुझिदिने होकी होइन भन्ने चीन्ता हुन्छ । साथै अन्य विविध प्राविधिक र आर्थिक कुराहरु पनि जोडिएका हुन्छन् ।
हरेक व्यक्तिले सुरक्षित भविष्य र जीवनको आशा गर्ने भएको कारण लामो समयसम्म काम गर्न सकिदैन कि भन्ने पनि धेरैमा छ । तर अहिले राम्रो गरेर पछिसम्मको लागि कमाउन पनि सकिने धेरै सम्भावनाहरु पनि छन् । यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र व्यवसायिक रुपमा बजार कम हुँदा धेरै प्रतिभाहरु अझै पनि खुलेर यस क्षेत्रमा आउन सकिरहेका छैनन ।
केही समय अगाडि घर जाँदा, गाउँघरमा के गर्दै छौ ? भन्ने प्रश्नमा नृत्य सिकाउने काम गर्छु भन्दा अनुहार खुम्च्याउँदै प्रतिक्रिया दिने मानिसहरुले आज केही मात्रामा खुलेर कलाकारीता क्षेत्रलाई प्रशंसा गरेको कारण पनि आफुलाई खुशी मिलेको छ । आज धेरै अभिभावकहरुले आफनो छोराछोरीलाई नाच्न सिक्नका लागि पठाउने गर्नुहुन्छ ।
केही समय अगाडि नाच्दा नक्कली हुन्छ भनेर अगाडि बढेको सामाजिक र केही व्यत्तिगत विचारहरु आज नृत्य अर्थात कलाकारीता क्षेत्रलाई सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएर अगाडि बढीरहेका छन् ।
अझै पनि हाम्रो नेपालि समाजमा कलाकारीता क्षेत्रलाई फराकिलो दृष्टिकोणले मूल्यांकन गरिएको छैन । जसकारण यस क्षेत्रमा आफनो भविष्य बनाउँछु भनेर आउनेलाई चुनौति नै छ । तरपनि हरेक क्षेत्रमा सफल हुनका लागि आत्मविश्वास भने हुनैपर्छ नभए अन्य क्षेत्रमा पनि चुनौतिहरु उत्तिकै छन् ।
चलचित्र हेरेर नायिकाहरुको नृत्यबाट प्रभावित भएर नृत्य सिक्दै डान्स टिचर, डान्स इन्ट्रक्टर, कोरीयोग्राफि गर्दै निर्देशकसम्म आइपुग्दा केही पीडा, केही रहर अनि इच्छाहरुको त्याग मैले पनि गरेकी छु । त्यसैले आज यो ठाउँसम्म आइपुग्न सफल भएकी छु । म्यानेजमेन्ट विषयमा मास्टर त गर्दैछु तर डान्समा पनि मास्टर गर्ने विचार लिएकी छु । अझ आफनो कलालाई निखार्दै यहि क्षेत्रमा अझै केही योगदान गरौँ भन्ने छ ।
मलाई यस ठाउँसम्म आइपुग्नका लागि मेरो हरेक कदममा साथ दिने मेरो परिवारप्रति आभारी छु । साथै मेरो रुचिको क्षेत्र नृत्यमा साथ दिनुहुने मेरो गुरु रामकुमार राईप्रति सधै सम्मान छ । यो श्रेय उहाँलाई दिन चाहान्छु । यस्तै मलाई अनि मेरो कामलाई मन पराएर अझ कामप्रति जागृत गराउनुहुने सम्पूर्ण दर्शक अनि श्रोताहरुलाई धन्यवाद । सबैको माया अनि आर्शिवाद सदा पाइरहुँ ।
आज माघे सङ्क्रान्ति, ध्यान साधना, दान गरी मनाइँदै